Myanmar Fonts ( Alpha Zawgyi,Myanmar2, Myanmar3) – Myanmar IT Academy
2 months agoHow to fix 0xc0000142 Error code on Office 2016 & 20192months agoHow to Enable SSH on VMware Esxi 7.04months agoCentos 8.0 GUI to Core Server Tutorial4months agoCentos 8.0 Core to GUI Tutorial4months agoMikrotik 6.46 OS installation on Centos 8.0 KVM Tutorial
Posted On : August 30, 2013 Published By : Myanmar IT Academy
Myanmar Fonts တွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Alpha Zawgyi ရယ် ၊ အစိုးရရုံးတွေအသုံးများတဲ့ Myanmar2font ရယ် ၊နောက်နှစ်တွေမှာ windows တွေမှာပါလာမဲ့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ Myanmar3font လေးတွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အခုဆိုMyanmar3 font ကို Google Chrome မှာအသုံးပြုနေပါသည်။အောက် Link ကနေ Download လုပ်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာ။
Apha Zawgyi (for 32 bit ) – Download Here:
Alpha Zawgyi (for 64 bit) – Download Here:
Myanmar2fonts – Download Here:
Myanmar3fonts – Download Here:
Posted in: Myanmar Fonts
7 thoughts on “Myanmar Fonts ( Alpha Zawgyi,Myanmar2, Myanmar3)”
atyab hashmi says:
Noce Post….For More Softwares Please Visit My Blog.
Lphone Khaing says:
nanyu maw says:
sansumg sm-a700h version 5.0.2 myanmar font ma ya per.
font change ter (this font is not supported) so pee paw nay tel bya. please help me sir
မြန်မာ3 မှာfနေရာ က အသတ်က s မှာရောက်နေပါတယ် ပြန်မှန်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခင်ဗျာ
Cuteboy lay1500 says:
အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခုဒီပို့စ်မှာတင်ထားပေးတဲ့ ဖောင့် နဲ့ ကီးဘုတ်တွေအားလုံးဟာ(XP/7/8/10-32/64 bit)၀င်းဒိုးအားလုံးနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ် အများအတွက် ဆက်လက်အကျိုးပြုနိုင်ပါစေဗျာ
This Week: 19499
This Month: 50176